မိနျးမတိုငျးလိုခငျြတဲ့ ယောကျြားဆိုတာ . . . – Shinyoon
အပွောမကောငျးခငျြနပေါ ပွောပွီးသားကတိလေးတော့ တညျစခေငျြတယျ အပွောတဈမြိုး အလုပျတဈမြိုး လုပျတာမြိုးမဟုတျပဲ လုပျပေးမယျလို့ ပွောထားတဲ့အရာတှကေို လုပျပေးနိုငျတဲ့ ယောကျြားတဈယောကျပေါ့ ။
သဲသဲလှုပျမခဈြပွခငျြနပေါ လိုအပျတဲ့အခါ ရှကေ့နေ မားမားမတျမတျ ရပျတညျစခေငျြတယျ အမှားတဈခုခုကွုံတဲ့အခါ ကိုယျ့အပျေါ အပွဈတငျပုံခပြွီး ခေါငျးရှောငျတတျတဲ့ ယောကျြားတဈယောကျလောကျ အောကျတနျးကတြာ မရှိဘူးလေ ။
ကြိကြိတကျ မခမျြးသာခငျြနပေါ အလုပျလုပျခငျြစိတျလေးတော့ရှိစခေငျြတယျ အကွောငျးပွခကျြတှေ ဆငျခွခွေငျလကျတှေ နဲ့အလုပျလုပျခငျြစိတျမရှိတဲ့ ယောကျြားတဈယောကျက ဘဝရညျမှနျးခကျြတှေ မရှိတတျဘူးလေ ။
ရုပျမခြောခငျြနပေါ ကြှနျမအပျေါ သစ်စာလေးတော့ ရှိစခေငျြတယျ ရုပျရညျဆိုတာ အခြိနျတနျ ပကျြစီးသှားမှာ အကငျြ့စာရိတ်တက အဓိကပဲ နငျ့ယောကျြားက ခြောလိုကျတာဆိုတာထကျ နငျ့အပျေါခဈြတတျ ဂရုစိုကျတတျလိုကျတာဆိုတာလေးက
ပိုပွီး ပီတိ ဖွဈစရာကောငျးပါတယျ ။
ယောကျြားတဈယောကျကို ဦးဏှောကျနဲ့ ရှေးခယျြတဲ့ မိနျးမတဈယောကျတော့ မဟုတျဘူးပေါ့ ကိုယျခဈြတဲ့ ယောကျြားတဈယောကျကို တခွားတဈယောကျယောကျက ဝဖေနျပွဈတငျတာမြိုး ဘယျမိနျးမကမှ မကွိုကျတတျဘူးလေ
ကြှနျမလဲ မိနျးမသားထဲ မိနျးမသားတဈယောကျပါ ကိုယျခဈြတဲ့ ယောကျြားကို ဘယျတဈဦးတဈယောကျမှ ဝဖေနျအပွဈတငျနတောမြိုး မလိုခငျြဘူး ။ ကိုယျကိုယျတိုငျ ဝဖေနျထောကျပွကောငျးထောကျပွပါလိမျ့မယျ အပွဈပွောကောငျးလဲ ပွောမိလိမျ့မယျ ဒါပမေယျ့ ခြိုးနှိမျတာမဟုတျဘူး မခံခငျြစိတျဖွဈအောငျ ပွောမိတာမြိုးပါ ။ ဒါပမေယျ့ တခွားတဈယောကျလာပွီးပွောလာတဲ့အခါ ကြှနျမတို့မိနျးမသားတှကေပဲ ကပျကပျလနျရနျတှမေိ့တာပါ ။ ဒီအခြိနျ ကိုယျ့အနားမှာ ရှိတဲ့လူက မှနျနရေငျ ကြှနျမတို့မှာ ပွောအားတှေ ရှိတယျ။ မှားနတေဲ့အခါ ပွနျပွောခငျြပါရဲ့နဲ့ ခေါငျးငုံ့ခံခဲ့ရတာပါတယျ ။
ဒါတှကွေောငျ့ ကြှနျမ လိုခငျြတဲ့ယောကျြားဆိုတာ ကမ်ဘာပျေါက အကောငျးဆုံးမဖွဈရငျတောငျ ကြှနျမအပျေါ ကောငျးတဲ့သူဖွဈစခေငျြတယျ ။ လောဘလို့ ခေါငျးစဉ်ပဲ တပျတပျ အတ်တလို့ ခေါငျးစဉျပဲ တပျတပျ … တကယျတမျး မိနျးမသားတဈယောကျကို နားလညျရငျ ဒါဟာ မိနျးမတဈယောကျရဲ့ အခဈြမှနျး သိလာလိမျ့မယျ ။
မိန်းမတိုင်းလိုချင်တဲ့ ယောက်ျားဆိုတာ . . .
အပြောမကောင်းချင်နေပါ ပြောပြီးသားကတိလေးတော့ တည်စေချင်တယ် အပြောတစ်မျိုး အလုပ်တစ်မျိုး လုပ်တာမျိုးမဟုတ်ပဲ ​လုပ်ပေးမယ်လို့ ပြောထားတဲ့အရာတွေကို လုပ်ပေးနိုင်တဲ့ ယောက်ျားတစ်ယောက်ပေါ့ ။
သဲသဲလှုပ်မချစ်ပြချင်နေပါ လိုအပ်တဲ့အခါ ရှေ့ကနေ မားမားမတ်မတ် ရပ်တည်စေချင်တယ် အမှားတစ်ခုခုကြုံတဲ့အခါ ကိုယ့်အပေါ် အပြစ်တင်ပုံချပြီး ခေါင်းရှောင်တတ်တဲ့ ယောက်ျားတစ်ယောက်လောက် အောက်တန်းကျတာ မရှိဘူးလေ ။
ကျိကျိတက် မချမ်းသာချင်နေပါ အလုပ်လုပ်ချင်စိတ်လေးတော့ရှိစေချင်တယ် အကြောင်းပြချက်တွေ ဆင်ခြေခြင်လက်တွေ နဲ့အလုပ်လုပ်ချင်စိတ်မရှိတဲ့ ယောက်ျားတစ်ယောက်က ဘ၀ရည်မှန်းချက်တွေ မရှိတတ်ဘူးလေ ။
ရုပ်မချောချင်နေပါ ကျွန်မအပေါ် သစ္စာလေးတော့ ရှိစေချင်တယ် ရုပ်ရည်ဆိုတာ အချိန်တန် ပျက်စီးသွားမှာ အကျင့်စာရိတ္တက အဓိကပဲ နင့်ယောက်ျားက ချောလိုက်တာဆိုတာထက် နင့်အပေါ်ချစ်တတ် ဂရုစိုက်တတ်လိုက်တာဆိုတာလေးက
ပိုပြီး ပီတိ ဖြစ်စရာကောင်းပါတယ် ။
ယောက်ျားတစ်ယောက်ကို ဦးဏှောက်နဲ့ ရွေးချယ်တဲ့ မိန်းမတစ်ယောက်တော့ မဟုတ်ဘူးပေါ့ ကိုယ်ချစ်တဲ့ ယောက်ျားတစ်ယောက်ကို တခြားတစ်ယောက်ယောက်က ဝေဖန်ပြစ်တင်တာမျိုး ဘယ်မိန်းမကမှ မကြိုက်တတ်ဘူးလေ
ကျွန်မလဲ မိန်းမသားထဲ မိန်းမသားတစ်ယောက်ပါ ကိုယ်ချစ်တဲ့ ယောက်ျားကို ဘယ်တစ်ဦးတစ်ယောက်မှ ဝေဖန်အပြစ်တင်နေတာမျိုး မလိုချင်ဘူး ။ ကိုယ်ကိုယ်တိုင် ​ဝေဖန်ထောက်ပြကောင်းထောက်ပြပါလိမ့်မယ် အပြစ်ပြောကောင်းလဲ ပြောမိလိမ့်မယ် ဒါပေမယ့် ချိုးနှိမ်တာမဟုတ်ဘူး မခံချင်စိတ်ဖြစ်အောင် ပြောမိတာမျိုးပါ ။ ဒါပေမယ့် တခြားတစ်ယောက်လာပြီးပြောလာတဲ့အခါ ကျွန်မတို့မိန်းမသားတွေကပဲ ကပ်ကပ်လန်ရန်တွေ့မိတာပါ ။ ဒီအချိန် ကိုယ့်အနားမှာ ရှိတဲ့လူက မှန်နေရင် ကျွန်မတို့မှာ ပြောအားတွေ ရှိတယ်။ မှားနေတဲ့အခါ ပြန်ပြောချင်ပါရဲ့နဲ့ ခေါင်းငုံ့ခံခဲ့ရတာပါတယ် ။
ဒါတွေကြောင့် ကျွန်မ လိုချင်တဲ့ယောက်ျားဆိုတာ ကမ္ဘာပေါ်က အကောင်းဆုံးမဖြစ်ရင်တောင် ကျွန်မအပေါ် ကောင်းတဲ့သူဖြစ်စေချင်တယ် ။ လောဘလို့ ခေါင်းစဉ္ပဲ တပ်တပ် အတ္တလို့ ခေါင်းစဉ်ပဲ တပ်တပ် … တကယ်တမ်း မိန်းမသားတစ်ယောက်ကို နားလည်ရင် ဒါဟာ မိန်းမတစ်ယောက်ရဲ့ အချစ်မှန်း သိလာလိမ့်မယ် ။